(Kugcine ukubuyekezwa On: 12/12/2019)
Zonke izivakashi ukuphupha ngani ngokuvakashela amagugu afihliwe e-Europe kanye amadolobha laseYurophu. Isithombe wabo ngenjabulo umi eceleni kwe-Eiffel umbhoshongo, Colosseum noma uBig Ben kwenza bonke abakhona bazizwe ezehlukile (futhi thina ngokuphelele uthole ukuthi!). Noma ungumuntu Instagram umlutha noma umuntu othanda ukuvakasha "iqiniso", uya izindawo emhlabeni jikelele is everything!
QAPHELA: Uma ucabanga phakathi uya ngebhasi kuqhathaniswa uya ngesitimela – choice kufanele njalo kube ngesitimela.
Into yokuqala efika engqondweni yakho lapho ukhuluma ngani Luxembourg kuyinto amabhange. Izwe Kuyaziwa ncamashi ngoba wabo. Kodwa Luxembourg sika steepled amasonto, izindlu zamatshe, nemisele encane benza ukuyivakashela ngaphezulu ejabulela kunokuba ufisa balindele. Yingakho le ndawo ingenye amagugu ezingavamile ezifihliwe eYurophu phakathi izihloko leli zwekazi sika. Kuyinto indawo enhle, wabeka endaweni lapho Petrusse futhi Alzette emifuleni ukuhlangabezana. Ungavakashela ezinye zokudlela kanye hip Amabha eduze nje endaweni yomphakathi ephakathi. Ngaphezu kwalokho, rue Philippe II has a bunch of izitolo, ngakho kungcono kube ukulungele ukuchitha a bucks ezimbalwa! Sekukonke Luxembourg iyindawo ephelele romantic ngempelasonto.
Kunzima kubhekwe omunye amagugu afihliwe e-Europe uma une dinosaur izinsalela zamathambo eduze nawe. Yup, ulifunda kwesokudla. Dinosaur izinsalela zamathambo zingatholakala ngasogwini Jurassic ka Weymouth. Nokho, ababaningi abantu banquma angu-3 ngesitimela waseLondon ukubabona. Ones ukwenza ungakwazi ukujabulela ezahlukene watersports futhi ube fish and chips ogwini. Noma ukhetha ukudla ezinye gastropub. Kusukela iphawundi kancane phansi okwamanje, yisikhathi ilungelo lokwenza uhambo England. Futhi ngesikhathi esifanele ngokuvakashela Weymouth kungaba Agasti ngesikhathi Weymouth zomkhosi.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog, noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/hidden-gems-europe/ - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)